Ny fifohana sigara amin'ny fitondrana vohoka dia manana fiantraikany goavana
Ny fifohana sigara amin'ny vehivavy bevohoka | Health & Baby
Fialamboly noho ny fifohana sigara nandritra ny fitondrana vohoka
Mihabetsaka ny loza ateraky ny homamiadana, tsy amin'ny reny mifoka sigara ihany
Fadio ny fifohana sigara amin'ny vohoka
Araka ny statistika, manodidina ny 30 isan-jaton'ny mpifoka sigara dia mbola mampiasa ny sigara ao am-piantombohan'ny bevohoka. Amin'ireny, ny antsasany dia mahavita mitazona ny tanany amin'ny ala mikitroka mandritra ireo volana voalohan'ny fitondrana vohoka. Ny fifohana sigara mandritra ny fitondrana vohoka dia misy fiantraikany goavana.
Ny fifohana sigara amin'ny vehivavy bevohoka - misy vokany mahatsiravina
Ho an'ny ambiny, manodidina ny 15 isan-jato, ny fiankinan-doha amin'ny nikôtinina dia mamaritra mafy ny fiainana andavanandro izay hanisy ratsy ny zanakao.
Ny foka amin'ny vehivavy bevohoka dia taboo!
Ny votoatiny voalohany dia mampiseho ny voka-dratsin'ny reny mandritra ny fitondrana vohoka
Raha meconium - na koa amin'ny teny hoe Kindspech - dia mibontsina ny seza voalohany aorian'ny fiterahana, izay navotsotry ny zazakely. Izany dia efa niforona tamin'ny volana fahefatra amin'ny maha-bevohoka azy. Ahitana kolikoly misy tsiranoka, sela ao amin'ny tranon-tsolika marefo, ary mitelina fluid amniotic, izay mety misy tsiranoka amin'ny sela hoditra sy volo.
Ny fikarohana koa dia naneho koa fa afaka mahafantatra ireo metabolites sy ireo zava-mahadomelina izay naditra nandritra ireo volana 6 farany tamin'ny fitondrana vohoka. Na dia izany aza, ny fandinihana amin'ny antsipiriany ny habetsahan'ny setroka nalain'ny reny nandritra ny fitondrana vohoka dia tsy azo atao.
Araka ny efa nampoizina, ny dokotera sy ny manam-pahaizana dia manoro hevitra mafy amin'ny fifohana sigara mandritra ny fitondrana vohoka Amin'ny ankapobeny, ny fitomboan'ny foetus dia miharatsy ary mety hiteraka aloha loatra, na amin'ny toe-javatra faran'izay ratsy, dia mitombo amin'ny fomba maharitra ny fiterahana. Ankoatr'izany dia mitombo ny tahan'ny risika toy ny rantsambatana sy ny taova.
Ankoatr'izay, dia voaporofo fa ny zazakely teraka amin'ny vehivavy bevohoka dia mihamitombo kokoa noho ny amin'ny maha-bevohoka azy. Satria, noho ny fifohana sigara, dia mitombo ny vavan-dreniny.
Noho izany dia miharatsy ny fikarakarana amin'ny tadim-poitra ary ny zaza dia mihena sakafo sy oksizenina vitsivitsy, izay misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fivoarany sy ny fivoarany. Ankoatr'izay dia mety ho avo roa heny ny mety hisian'ny aretina aorian'ny fahafatesana.
Ny fandinihana dia naneho fa ny vehivavy bevohoka dia mahatratra ny andro iray isan'andro ao anaty 13 ho an'ny dian-tongotra. Voafafa ho an'ny fitondran'ny vehivavy bevohoka amin'ny sivy volana, izany dia miteraka sigara 3600. Raha na dia ny zavatra simika 4000 ao anaty setro-tsigara aza, izay misy karazana kansera sy tena mampidi-doza, dia raisina an-tsaina, mety ho zavatra ratsy izany.
Ny fisian'ny mpifoka dia mihabetsaka be ny mety ho voan'ny kanserany maro. Nefa na dia mifoka sigara mandritra ny fitondrana vohoka aza ny zaza, dia voan'ny kansera ny fototry ny aretina manaraka. Amin'io lafiny io, ny fikarohana nataon'ny Foibem-pikarohana kanseran'ny Aterineto dia nahatsikaritra fa ny zaza reny izay nifoka sigara nandritra ny fitondrana vohoka dia manodidina ny 1,5 fotoana hitera-bolana sy kanseran'ny atidoha. Ao amin'ny homamiadan'ny havokavoka dia mitombo ny fihenan'ny 1,7-fold ary koa ny homamiadan'ny kanseran'ny voaly.
Noho izany, ny famaranana dia ny hoe ny vehivavy bevohoka dia tokony hijanona tsy hifoka sigara. Tsy hoe mendrika fotsiny ny zaza vao teraka. Ny renim-pianakaviana koa dia afaka mahita ny fiantraikan'ny fijanonana amin'ny fifohana sigara aorian'ny ora vitsivitsy. Araka izany, aorian'ny minitra 20, dia mety ho hita ny fatran'ny tosidra sy ny fo. Ao anatin'ny adiny valo dia efa mihena be ny volavolam-panarenana karbona ao amin'ny rà. Izany dia hahatsikaritra haingana ny zazakely, satria ankehitriny koa izy dia mahazo ny ampy ny oksizenina sy ny sakafo.
Rehefa voarara ny fifohana sigara anefa, dia tsy tokony hahatsiaro ho tsy misy ny mpiray efitra na ny mpiara-monina sy ny vehivavy bevohoka. Ankoatra izany, ny sigara efa nomanin'ny reny dia mety hampidi-doza ny zaza ao am-bohoka. Noho izany, ny tranon'ireo vehivavy bevohoka dia tsy mifoka sigara. Mazava ho azy fa tokony hesorina daholo ny fifohana sigara na dia aorian'ny fitondrana vohoka aza.
Atsaharo ny fifohana sigara fahasalamana
Atsaharo ny fifohana sigara - mijanona tsy mpifoka
Atsaharo ny fifohana sigara amin'ny hypnosis
Atsaharo ny fifohana sigara raha tsy sorena ny soritr'aretina
Ny toaka amin'ny vehivavy bevohoka
Tranonkala fanangonana zazakely
Sunscreen ho an'ny zazakely & zazakely | Fahasalamana ...
Fanomezana ny fahaterahan'ny zaza
Mialà sasatra Baby toddler
Ravin-tranonkala reny mitaiza
Zarao miaraka amin'ny zazakely ny iray tam-po aminy